Ubuhle obumnyama / base-Afrika: Abesifazane nabesilisa abathandekayo (abamnyama / nabase-Afrika), ama-albino afana nabanye besifazane namanye amadoda, ukuba i-albino kumane nje kuyantuleka ukufaka imibala futhi sinesikhumba esibucayi kakhulu
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: March 14, 2020 00: 00 Awekho amazwana
Bheka isithombe esihle lesi (umfanekiso), awumuhle udadewethu? Ngeshwa, kulandela izinkolelo ezingenasisekelo futhi "eziwubuphukuphuku", ama-albino ashushiswa, bese edonswa phansi ... Funda kabanzi
I-Tanzania ilahla isiNgisi njengolimi lokufundisa nolungenela isi-Kiswahili: ngemuva kwalokho, iqiniso laqhubeka, lapho inkululeko yama-60s isitholile; Kodwa-ke, kubaxhasi be-Afrika "Ekhululekile" ngaphezulu (kubo, inkululeko yayingeyokuzenzisa, i-neo-colonism ithatha isikhundla sohlelo oludala, inothi yoMhleli)
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Agasti 31, 2019 02: 30 Awekho amazwana
Lokhu kudinga nezimfuno zokuqala ezifana nolimi olujwayelekile, noma okungenani izilimi zesifunda zase-Afrika zomdabu wezwekazi. Ngakho-ke, maqondana ne-Kiswahili - vele ... Funda kabanzi
I Massacre we Maji Maji: Ukulandela inkomfa eBerlin, eJalimane kusungulwa protectorate yaseTanganyika - ezwekazini Tanzania - ngemva kokunqoba ukumelana evuthayo Makonde abantu Mbunga "I eziwubukhazikhazi Kilwa edolobheni ehamba phambili East Africa ezikhathini yasebukhosini, is ebezingakabonwa ngamabhomu ngemva kokuhlasela ebhubhisayo isiPutukezi ngesikhathi ukuhweba ngezigqila "
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 28, 2019 08: 12 Awekho amazwana
NjengaseNamibia, i-colonization yaseJalimane yaseTanganyika ibonakala ngodlame oludlulele. I-Reich ibulala amakhosi aphikisayo noKarl Peters, umholi wamakholoni, izuza i-no ... Funda kabanzi
ETanzania: Owesifazane osemusha uqeqesha amagundane ukuthola imvume yezimayini: Owesifazane waseTanzania wenze konke okusemandleni ukuqeqesha amagundane ukuthola noma ukukhomba izimayini ezifihliwe ... (VIDEO)
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Ephreli 18, 2019 00: 00 Awekho amazwana
Ngemuva kokuqeqeshwa, izinduku ezincane zisebenza futhi zisebenza kahle kakhulu. "Amagundane ayizidalwa ezinhle futhi ezihlakaniphile," kusho yena! E ... Funda kabanzi
Ubuhle baseTanzania: Wema Sepetu, Miss Tanzania 2006 "Ngithanda uma umuntu engishaya ngezikhathi ezithile" ... (VIDEO)
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: March 16, 2019 00: 00 Awekho amazwana
I-Wema Sepetu, wonke umuntu wavumelana ngobuhle bakhe, ngokuwina uMncintiswano we-Miss Tanzania 2006. Ube ngumdlali wezintatheli odumile, uWema Sepetu usanda kudala izambulo ... Funda kabanzi